Banyere 2017年第2季度，微Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua。德国恩克·阿卜杜勒（Nkeahụbọihedịka okpukpu）。 Ma obu 8x onu ogugu nke阿根廷。 Ma Obu 32x Onu ogugu nke葡萄牙.
李是我吗？ Twitterbyeghịonyeọbụlana Twitter nweremmasịnagịnangwaahịagị.
Kedu otuazụmahịasi eme kandịna-ege hantịdèirè; r ute na Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter?
0.1 Tinye Twitter标签（＃）
1 1.Jikọọya naọdịnayadịmma
1.3 Ihe na-akpatangwaahịa
2 2.Mepụtaakara njirimara
2.1 Ezigbo ihe omimi hashtagdịmfe mana-emetụta.
4 Ihendịzọga-echebara echiche
Onye dumea n’obi ma dike ike Twitter Hashtag（＃）nyere akajikọtaazụmahịanandịna-azụahịa网站n’ịkpakọtaọnọdụmaọbụisiokwu。 Nike apụtaranaịnwere ikeịbanyenaahịaahịanaahịaziri ezi.
Site naịkekọrịtaọdịnayama jiri shehtags mee ihen’ụzọdịirèna Twitter，ịbarụmepịtaahịana naịmepụtaihe mgbaruọsọmakanzukọgịna obere ego.
Tupu anyi abanye n’ime nke a，o di nkpa icheta na dika ahia，usoro izo eji Twitter ga-adighi iche na onu ahia。 Jide n’aka naịnwereatụmatụma naọna-akọwaihe mgbaruọsọdoro anya nkeazụmahịagị!
Ọzwakwa，dịkaPankaj Narang，Onye guzobere Socialert，ọnaghịarụrrna-arụarrọndụrrakakwụgwọnweta的身价都呈上升趋势。 Nke ana-emekarịkaịnwetaakụkọna-enweghịiheọbụlasiri ike na-eduban’ọgbọọganihu。 Kama nkeahụ，tụleeụmepụtamgbasa oziahịagịnkeọmana nkegịma na-ele ha na-eto eto site na ichebara mkpa nkendịahịagịtinyere ike nkeụlọọrụgịnangwaahịagị.
Ọna-enye akaịmekọrịtaatụmatụmgbasa ozigịdịkaakụkụnke usoroatụmatụahia。 Ebumnuchegịkwesịrịiji ihe mgbaruọsọmee kaịnweta ihe mgbaruọsọazụmahịa。 Nke a nwere ike iyintakịrịmgbagwoju anya，ma ebe a，anyịga-esogịkọọrọgịatụmatụabụọgbasaraahịahashtag nke ga-enyeregịaka.
Ndịna-eri nri taadịn’ozuzukarịakarịama na-eme ihe n’eziokwu，ha juputara na mgbasa ozi.
Nke aabụghịihedịiche na Twitter，ebeọbụnaịna-asọmpụọtụtụụlọọrụndịọzọn’ebeahụ。网站naịmepụtaọdịnayadịmma nkena-emetụtamana-amasịmmasịn’ahịagị，ịga-enwensịdịmmakarịaasọmpiahụ.
N’ihe banyereahịaahia，nke a dabara n’ime ebe ole na ole gaga-elekwasịanya：
Ejiri ihe na-eme ihena-emetụtaihe naeme，nkepụtarana usorondụdịmkpụmkpụmalekwasịanya。 dịkaọmụmaatụire ere zuru oke nkena-adịruụbọchịat.
#discountsdịkaanyịna-ejide kwaafọ#sale at #JCPenney ma nweta pennygị！ Nanịbchch3！ （超链接超链接） "
nchfọdụn’ogeọbụla的ekek nkke nkengwaahịana-elekwasịanya na ihe.
Ewezụgankeahụ，na-enye aka maọbụrụnaịna-emepụtaihe n’imeọdịnayagịma tinye mgbasa ozidịmmadịka ihe oyiyi maọbụvidiyo。一声尖叫，一声呐喊：
照片从ikena-ezipụozi nandịmmadụ在ike maọbụrụna ederede ederede.
Nke aabụghịechicheọhụrụn’ụwanke mgbasa ozi naahịakamaọna-arụọrụdịkankeọmana Twitterkarịanadịndụn’ezie。 Twitterdịkangwáọrụmakaịmepụtaakara ahabụezigboakụdịmma ma nwee ike iji ya mee ihen’ọtụtụụzọga ga-esi gbanwee obigị.
Ndịn’ozuzu hana-ekwukarịụdịahịamaọbụngwaahịaha maara。 Iheịma又名na-aghọghghotu n’imeụdịndịahụ。网站n’iji Twitter ijimepụtanjirimaragịakara，ga-enwe ikeịbanyena mpaghara nke iheùgwùahụ.
Dịka iheatụnke a，ọga-abụnaịmaara okwudịka "agagaghịaga ijenaanị" ọ "Nwee ezumike，Nwee KitKat". 利物浦足球俱乐部（Ejikọtaranambụna）利物浦足球俱乐部（Kitchen）。 Ndịaasụgharịwon’ụzọdịirèna Twitter #YNWA na #HaveABreak.
Ezigbo ihe omimi hashtagdịmfe mana-emetụta.
Ịmepụtahashtag iji mata ihe nwere ikeịbụngwáọrụdịike
网站地址是ikei igosi uzo ha huru uzo di iche iche ma di nma nke nani ndi mmadu nikere ike iru。 Na nkenke，ụdịahụna-eme kandị粉丝na-ereahịaha!
Otu ihe ijirịbaama banyere usoro an’agbanyeghịnaịga-anwale matụọanya otu esi eji ya。网站na iche echiche网站na okike nke njirimara gi maọbụakaragị，ịga-enwe ike izere ihere na-emecha mechaa.
是Bill Cosby gbara mgbe ha kere ya #Cosbymeme的主题标签。 N’ụzdodoro anya，n’enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala hana-emepụtama mee ka hype banyere kpakpandoahụ。 O di nwute na ha，bu ihe omuma nke mebiri：
Chee echiche na-ezighi ezi iji zere nsogbundịdịizendụ
Nke a bara uru karsịamaka obereụlọahịandịnkereikeịnweghiihemgbapụnkeọtụtụnd- eme egwuregwu na mgbasa ozi。 Oyighịkandịmmadụga-achọ#TomsPremiumSalmon，n’ihi ya enwere ikeịnwetangwa ngwa naọnọdụTwitter.
Ebembụ’ach-achọihe ga-eme na Twitter n’onwe ya。 Ọbụezie naụfọdụebenrụrụweebụna-enyendụmọdụna ihe ndzọzọnwere ikeịbauru，Twitter ga-enweta ozikachasịmma ebeọbụna oziahụdịna ala ahụ.
Kaanyịkwuo na Tomna-ahụkarịnabọ＃鱼油。 Ihe doro anyaọga-emebụịgbakwunyenkeahụna tweet makandụọhụrụn’anya：
"#TomsPremiumSalmonbụịhịana-ejide na a kediegwu #healthfoodọgaranyana #fishoil mana-achọ令人敬畏!
Site na isoro usoro，ga ga-enwe ike kwlite ha mana-ebugharịakaragịmaọbụngwaahịa
O doro anya naọtụtụebendịọzọna-enyeọrụịkwụụgwọtinyerendịna-ewu ewu，nyocha na nyocha，n’ihi ya，gaga-ahụnkwụnyeziri ezi nkenódan daa dandaabarnụ.
hash ez ie ie hash hash hash hash hashụụụụụlogo logo logo mit mit mitụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụ.
Mee ka hagụọ。 Ọbụrụnaịgaghịenwe ike imeli oge zuru ezu，ọdịkarịaalatụleeịmekọrịtaotu onye nwereahụmahụmadịnjikereịrbasọrụgịna mgbasa ozi nkeenweghịonwegị.
Buru n’uche na tweetgịna-echekarịbanyereazụmahịagị。 Ọbụrụnaịna-atụanya kandịna-ereahịagịbụrụndịchakachamara，mgbeahụ，atụlaanya naọga-erughịala na onyena-adọrọmmasịgị。 Twitter makaazụmahịaabụghịnaanịihe a na-eme "naanịn’ihi na onyeọbụlana-eme ya", maọbụihe ngosi nkeazụmahịagịna ebenrụọrụweebụmgbasa ozi.
推特（Twitter）上的Najdebe nkeụbọchị，laghachi na isi ihe，ikebụicheta。 Ozugboịmalitere Tweeting na-esote（atụanya）nkeọma，ọbụoge ijimụtaotúọdịirèhashtagsgị.
N’ebe a，ọdịmkpaịgharaịdaba’ọnyàefu’。 Nke apụtarana ga-ekpe ikpe maọịèèdịirè网站n’ile anya指标dịarọdịkachịkwandịmepụtara，ọnụahịaahịanananụegomgbanwe。 Nke abụihe ikeazụmahịagị，ọbụghịọnụọgụgụnkemmasịmaọbụre-tweetịnweta.
网站n’ịgbasonọmbaahịadịkamgbasa oziahịaTwittergị，ịga-enweikeụmepụtafoto nkeọrụna ihena-adịghị。 N’ebe a，ịga-achọpụtana ihekachasịewu ewu，ọbụghịmgbe niilebụihekasịmma makaazụmahịagị.
Iji mee nke a n’zzdịmfekarị，nikereikeịmasịijiụfọdụn’ime Jason n’imeatụmatụna hacks na ederede a.
-zwa-wenwa nam naye ye free free be be be be be twitter twitter twitter twitter twitter g g g g g g g iri iri iri iri iri iri Hootsuite，Ndịna-arọọrụna-elekọtammadụ，na Hashtrackingbụọfọdụnaịnwere ikeịnwale.
Imirikitisaịtịndịa na-efuụfọdụego，ma chee naọbụego n’imeahịamgbasa ozigị。 Ekwuwerị，ọeagaghịakwụgịọgwọ?
Na njedebe nkeụbọchị，at egla egwuịlaghachina ntanyeọbịbịamaọbụrụnaịchọtalanaahịaazụmahịagịadịghịarụụrụ。 Mgbeụfọdụ，ụzọkachasịmma maka iji eriri eji eme ihega-abụiheịgankeọma.
Ugbu a na we nwere echiche nke otu tweets nwere ike isi mee（maọbụịkwụsị）azụmahịagị，ịga-enweikeịghọtakpọmkwemotúusoroịzụahịa标签dịmkpa。 Na-echeta mgbe niile na ahagịbụinye ezigboahịagịahịana naụdịụfọdụmaọbụọzọ.
Jide n’aka jiri havehtags jiri amamihe mee ihe majikọtaha na Tweets ka hadịmma，ma n’otu ogeahụna-enweta uru ahahịa.
Na-adịgideadịgide，nọrọna-emekọiheọnụ，ma geendịna-egegịntịntịntịmgbe ha nagịna-akpakọrịtanaanyịna-emesigịobi ike，dịka Liverpool，#YNWA.